Samsung Galaxy S8, vidiny, toetra teknika ary famolavolana | Androidsis
Samsung Galaxy S8 sy S8 Plus, toy izany koa ny sainam-pirenena vaovao an'ny mpanamboatra
Rehefa avy niandry ela dia samy Samsung Galaxy S8 toa ny Galaxy S8 Plus, terminal roa izay nahafantarantsika ny zava-drehetra.
Tsy isalasalana fa ireo mpikambana vaovao ao amin'ny fianakaviana Galaxy dia ireo terminal ireo niharan'ny famoahana hafa. Sendra azy ve? Samsung dia te hitazona ny zanabola hatramin'ny farany hahatongavan'ny fampisehoana ny sainam-pirenena roa, Ireo telefaona izay toa tena tsara ary tsy isalasalana fa ho marika eo amin'ny sehatra avo lenta.
1 Volavola iray mitazona ny votoatin'ny Galaxy S7 Edge
2 Tsy misy isalasalana, ny Galaxy S8 no terminal mahery indrindra eny an-tsena
3 Bixby, ilay mpanampy feo vaovao ho an'ny Galaxy S8 sy S8 +
4 Daty sy famoahana ny daty
Volavola iray mitazona ny votoatin'ny Galaxy S7 Edge
Samsung dia nisafidy a endrika izay manana an'io Samsung ADN io toetra mampiavaka izany. Samy manana ny efijery misy sisiny miolikolika ny Galaxy S8 sy S8 +, ary avelao any aoriana ilay kinova mahazatra. Na ny eo anoloana na ny ao aoriana dia samy manana vera marokoroko izay manome endrika sy fahatsapana faran'izay premium ny terminal.
Andeha hiroso isika hijery izay vaovao raha oharina amin'ny teo alohany. Manombokar ny Galaxy S8 / S8 Plus dia manana efijery miaraka amin'ny teknolojia Infinity Display izay mampihena ny zana-kazo ambany sy ambony ka hatramin'ny farany ambany indrindra, hahatratrarana endrika hatsarana izay mihoatra ny mpifaninana aminy lehibe amin'ity sehatra ity, ny Xiaomi Mi MIX ary ny LG G6.
Na eo aza ny diagonal an'ny tsirairay avy efijery, 5.8 "amin'ny S8 na 6.2" amin'ny S8 +, mahatsapa tena tsara eo am-pelatanany ny terminal, ampahany amin'ny fahaizany (155 grama ho an'ny S8 sy 173 grama ho an'ny maodely S8 Plus).
Ny zava-baovao iray hafa dia ny tsy fisian'ny bokotra ara-batana intsony eo aloha. Aza manahy fa mbola misy ny bokotra, saingy miafina ao ambadiky ny efijery izy ka Nanjary tsy hita ny bokotra tranoNa dia mitazona fiasa mitovy amin'ny an'ny S7 aza izy ary hahatsapa ny hovitrovitra rehefa mampiasa azy io mba hahafantarantsika ny fampiasana azy.
Ary ny vaovao tsara hafa dia miaraka mpamaky sidina izay lasa any aoriana. Eto aho dia tsy hitsikera na hidera ny zava-misy amin'ity sensor biometrika ity satria, izaho manokana dia tiako kokoa io toerana io, saingy maro ny mpampiasa no tia ilay mpamaky ny rantsan-tànana eo alohan'ilay fitaovana.
Ary farany, manana ny lakilem-pifandraisana sy ny eny ivelan'ny vavahady ary ny fanaraha-maso ny volony amin'ny ilany havia amin'ny telefaona isika, ary eo amin'ny ilany ankavanana kosa misy bokotra manokana hiantsoana an'i Bixby, ilay mpanampy feo vaovao miaraka amin'ny Galaxy S8. Sy S8 Plus .
Tsy misy isalasalana, ny Galaxy S8 no terminal mahery indrindra eny an-tsena
modely Galaxy S8 Galaxy S8 +
Operating System Android Nougat 7.0 eo ambanin'ny interface interface custom Grace UX Android Nougat 7.0 eo ambanin'ny interface interface custom Grace UX
efijery 5.8-inch Super AMOLED tontonana misy fanapahan-kevitra 2K (2960 x 1440 teboka) ary 570 dpi 6.2-inch Super AMOLED tontonana misy fanapahan-kevitra 2K (2960 x 1440 teboka) ary 529 dpi
processeur Exynos 8895 maritrano valo misy fotony sy 64-kely Exynos 8895 maritrano valo misy fotony sy 64-kely
ram RAM an'ny LPDDR4 4GB 3 GB na 4 GB karazana LPDDR4 miankina amin'ny maodely
Tahiry anatiny 64 GB azo ovaina amin'ny alàlan'ny slot karatra fitadidiana 64 GB azo ovaina amin'ny alàlan'ny slot karatra fitadidiana
Fakan-tsary aoriana 12 MPX Dual Pixel miaraka amin'ny OIS sy f / 1.7 12 MPX Dual Pixel miaraka amin'ny OIS sy f / 1.7
Fakan-tsary aloha 8 MPX 8 MPX / horonan-tsary ao amin'ny 1080p
Conectividad LTE 4 taranaka ho avy - 2-2 Wi-Fi MIMO (antennas 2) ho an'ny fandrakofana haingam-pandeha haingam-pandeha - Bluetooth - GPS sy aGPS - OTG - Seranan-tsambo USB Type-C DualSIM Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / dual band / Wi-Fi Direct / hotspot / Bluetooth 4.0 / FM radio / A-GPS / GLONASS / BDS / GSM 850/900/1800/1900; Tarika 3G (HSDPA 850/900/1900/2100 - VIE-L09 VIE-L29) Tarika 4G (tarika 1 (2100) 2 (1900) 3 (1800) 4 (1700/2100) 5 (850) 6 (900) 7 (2600) 8 (900) 12 (700) 17 (700) 18 (800) 19 (800) 20 (800) 26 (850) 28 (700) 38 (2600) 39 (1900) 40 (2300) 41 (2500 ) - VIE-L09)
Fitaovana hafa Vatan'ny vy / vovoka ary fanoherana rano / sensor an'ny dian-tànana / accelerometer / gyroscope / rafitra famahana haingana Vatan'ny vy / sensor an'ny dian-tànana / accelerometer / gyroscope / rafitra famahana haingana / Vovoka ary fanoherana ny rano
bateria 3000 Mah 3500 mAh tsy azo esorina
lafiny X X 148.9 68.1 8.0 MG X X 159.5 73.4 8.1 MG
lanja Gramin'ny 155 Gramin'ny 173
vidiny 809 euro hatramin'ny 28 aprily 909 euro hatramin'ny 28 aprily
Amin'ny taratasy dia manana ny iray amin'ireo tsara indrindra isika, raha tsy ny avo indrindra amin'ny tsena. Ny mpanamboatra dia nisafidy ny vahaolana manokana hanomezana ainy fiainana ireo mpikambana vaovao ao amin'ny fianakaviana Galaxy S, na dia hisy aza ny kinova roa: ny iray miaraka amin'ny Samsung Exynos 8895 SoC ary ny iray hafa miaraka amina processeur Snapdragon 835, ilay firavaka amin'ny satro-boninahitr'i Qualcomm.
Miaraka amin'ity fanaingoana ity, miampy ny RAM 4 GB sy GPU Mali G71 mahery, Azoko atao ny manome toky anao fa ny Galaxy S8 sy S8 + dia ho afaka hamindra izay lalao na rindranasa tsy misy olana lehibe noho ny enta-mavesatra be takian'izy ireo.
Iray amin'ireo mpihetsiketsika indray ny efijery. Amin'ity tranga ity dia nisafidy a i Samsung tontonana misy refy 18.5: 9, toy ny apetaho ny LG G6. Ary ahoana ny momba ireo takelaka Super AMOLED izay mbola tsy fantatsika.
Ireo karazana efijery ireo dia manome mazava tsara sy tonony tena izy, miaraka amin'ireo mainty tonga lafatra. Raha ampiantsika amin'io ny zana-kazo farafahakeliny ananan'ny terminal dia manana telefaona tsara izahay hijerena ny atiny multimedia.
Raha ny momba ny fakantsary, Samsung dia mitazona solomaso 12 megapixel ho an'ny maodely roa, ny vahaolana mitovy amin'ny an'ny maodely teo aloha. Araka ny fantatrao tsara, fa ny telefaona manana megapixel vitsy kokoa dia tsy midika hoe ratsy kokoa izany, porofon'izany ireo sary tsy mampino nakan'ny Galaxy S7, noho izany, raha tsy misy ny fitsapana azy tsara kokoa, ny fakantsary an'ny Galaxy S8 sy S8 + toa tena tsara.
Bixby, ilay mpanampy feo vaovao ho an'ny Galaxy S8 sy S8 +
Ny zava-baovao lehibe hafa dia miaraka Bixby, Mpanampy ny feon'i Samsung izay tonga taorian'ny fividianana Viv ary izay mihoatra lavitra noho izay hita tamin'ny rafitra S-Voice.
Ary i Bixby ve mahavita mahatakatra ny teny manodidina sy ny fiteny voajanahary ka tsy ho tafahitsoka matetika toy ny tamin'ny S-Voice.
Ho fanampin'izay, ilay mpanampy amin'ny feo Samsung vaovao dia hanolotra safidy hafa toy ny efijery izay ahitantsika ny fampahalalana mifandraika amin'ny mpampiasa toy ny fampahatsiahivana, mailaka, sns.
Bixby dia hanana fanohanana feno ho an'ny fampiharana Samsung rehetra ary manantena ny mpanamboatra fa hanatsara ity rindrambaiko ity ny mpamorona, na dia tsy hahafantatra aza isika raha tsy mandalo volana vitsivitsy.
Indrisy Amin'ny fiteny anglisy sy korean ihany no misy ny BixbyNa dia antenaina aza fa ho tonga amin'ny tapaky ny taona ny Espaniôla avy ao Etazonia ao anatin'ny fanavaozana izay hanisy fiteny hafa amin'ny ho avy.
Daty sy famoahana ny daty
Toy ny nataony Samsung Galaxy S8 satria ny Galaxy S8 + dia hamely ny tsena amin'ny 28 aprily amin'ny vidiny 809 sy 909 euro, na dia efa vitanao aza boky ao amin'ny Amazon. Fantsona iray izay tsy tratry ny paosy rehetra fa tsy isalasalana fa ho iray amin'ireo avo lenta farany natolotra tamin'ity taona ity. Ary aminao, inona ny hevitrao momba ny Galaxy S8 vaovao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Samsung Galaxy S8 sy S8 Plus, toy izany koa ny sainam-pirenena vaovao an'ny mpanamboatra
Ka ny miampy ihany no ho porofon-drano sy vovoka ???
Salama Roberto, ireo maodely roa ireo dia hanohitra ny vovoka sy ny rano, ny latabatra efa voahitsy.
Samsung DeX Station, izao no fiasan'ny rafitra birao an'ny Galaxy S8 sy S8 +
Ny BQ dia manavao ny laharany U mankany Android 7.1.1. Lazainay aminao ny pitsopitsony rehetra sy ny fomba hirosoana